AliveCor inoda kubvisa ECG mashandiro eApple Watch muUS yekutyorwa kwepatent | Ndinobva mac
AliveCor inoda kubvisa basa reECG kubva kuApple Watch muUS yekutyorwa kwepatent
AliveCor, kambani inotengesa mutengi ECG Hardware nemasevhisi, iri kutora mhosva yayo yekutyora patent kurwisa Apple nhanho imwezve nechichemo kuUS International Trade Commission. Izvo zvauri kutsvaga ndeye kuendesa kunze kurambidzwa kune ese "anotyora" Apple Watch mamodherukusanganisira Apple Watch Series 4 uye Series 5.
Iyo kambani AliveCor yakatanga matanho anodiwa ekukumbira zviri pamutemo kuti kuunzwa kwemhando dzese izvo zvinoenderana nazvo zvinorambidzwa kukanganisa kodzero yako yeECG. Aya ndiwo marondedzero anoita Apple Watch nhepfenyuro 4 ne5. Nekudaro, Apple dzakateedzana nhanhatu hadzitaurwe, asi izvi hazvireve kuti haina kuiswa gare gare, chimwe chinhu chinoratidzika kunge chine musoro.
AliveCor mune chirevo chakataura kuti kuiswa kwechikumbiro ichi idanho rimwe, pakati pevamwe, iro AliveCor iri kupa kuti utore danho maringe nezvavanotaura se «Ikopi yeApple yechinangwa cheAliveCor's tekinoroji yehunyanzvi«. Izvi zvinosanganisira kugona kutora kuverenga kweECG paApple Watch, uye kuita ongororo yemoyo.
Mhosva yaipomerwa Apple yakamhan'arwa muna Zvita. Kubatanidzwa kweiyo tech hofori yeECG Hardware uye software yekutsigira yainzi inoputsa patent matatu nzira dzakadzama dzekuona nekutarisa moyo wemagetsi nemidziyo inopfeka. Asi ichi chikumbiro chekuti Apple ibvise yayo Apple Wacth kuyerwa inoenda nhanho imwe kumberi. Uye zvine njodzi kana zvinhu zvikafamba zvakanaka kukambani iyi.
Ndagara ndichidzivirira iyo Apple Watch seimwe yemidziyo yakakosha iyo Apple inayo nekuda kwebasa rayo mune yehutano munda. Chingave chinonyadzisa kana chikaperera mune imwe kudonha pamusoro pekombiki makakava. Ndinovimba chibvumirano chasvika, kana AliveCor iri chokwadi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » AliveCor inoda kubvisa basa reECG kubva kuApple Watch muUS yekutyorwa kwepatent
AirTags inochengeta musi waApril 30 musi pakusununguka
Trailer yekutanga yemwaka wechipiri waTed Lasso ikozvino yave kuwanikwa paYouTube